Kungase kuphele ngoMazinyo kwiTeam of Choice - Impempe
Kungase kuphele ngoMazinyo kwiTeam of Choice
U-Ernst Middendorp ocija iMaritzburg United
Kungenzeka ukuthi u-Ernst “Mazinyo” Middendorp, oqeqesha iMaritzburg United, uyabona uzokhonjwa indlela yileli qembu uma kubhekwa indlela akhulume ngayo ngoLwesithathu ebusuku.
ITeam of Choice iphinde yathola isibhaxu ishaywa yiKaizer Chiefs ngo 2-0 emdlalweni weDStv Premiership, eFNB Stadium, eNasrec, ngoLwesithathu. Ngemuva komdlalo uMiddendorp ubebukeka elilahlile ithemba yize ebancomile abadlali bakhe ngokudlala kahle.
Ebuzwa ngemuva komdlalo ukuthi luthini uhlelo lweqembu ukuya phambili ikakhulukazi njengoba kuzoba nekhefu likaKhisimusi, uMazinyo uphendule wathi: “Angazi konke kulele kubaphathi beqembu.”
Le mpendulo isidweba sicace isithombe sokuthi sekuyazwela kulo mqeqeshi waseGermany njengoba iqembu lingayitholi imiphumela.
Ngaphambi kwalo mdlalo iWitness ibike ukuthi uMazinyo bekumele awine umdlalo weChiefs ukuze agcine umsebenzi wakhe. Iveze ukuthi usihlalo weTeam of Choice, uFarook Kadodia, ukhathazekile futhi uphoxekile ngemiphumela engemihle ngaphansi kukaMiddendorp.
“Sizohlala phansi sicubungule yonke into ngemuva kwalo mdlalo. Kumele siphume siye emakethe sibheke abadlali abambalwa,” kusho uKadodia kwiWitness.
“Ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu ukuthi siyabona sinezinkinga. Uma sekuvulwa iwindi ngoJanuwari kuzomele senze ushintsho ukuze sibuye ngamandla ngonyaka ozayo.”
Mayelana nomdlalo neChiefs uMazinyo uncome ukuzinikela kwabadlali bakhe, wabalula ukuthi abanayo inhlanhla.
“Ngicabanga ukuthi sithele igazi phansi senza iphutha kwesokunxele kwagcina kungu 1-0,” kusho uMiddendorp.
“Indlela esiqale ngayo isiwombe sesibili sicindezela, yenze ukuthi sibe nenqwaba yamathuba. Sibe nebhadi nje ukuthi sishaye ipali.
“Bengilindele igoli noma amabili njengakuyo yonke imidlalo esesiyidlalile kuze kube manje kodwa sizobona ukuthi kwenzekani ukuya phambili.”
Emidlalweni engu-18 esidlalwe yiTeam of Choice izithola isendaweni ka-13 ngamaphuzu angu-15. Isakwaze ukuwina imidlalo emithathu, yadlala eyisithupha ngokulingana, yase ishaywa kweyisishiyagalolunye.
Sekukhona ukukhuluma okuthi uma iMaritzburg imkhomba indlela uMazinyo ingase iphephele kuGavin Hunt osanda kuhlukana neChippa United.
Previous Previous post: Kusebenze inhlanhla iChiefs ishaya iMaritzburg koweligi
Next Next post: U-10111 uncoma amagalelo kaBilliat kwiChiefs